Ukwenza ifilimu: I-DSLR vs. Iikhamera zeVidiyo
Ngokubanzi, ukubambelela kwividiyo yecamcorder uziva ukhululekile ngaphandle kokufota ngeDSLR. Silayida nje isandla sakho ngomtya wayo kwaye isithupha sakho sihlala ngokwamaqhosha. Ukujonga indawo ngumbulelo we-ergonomic kwiscreen sokuphuma, kwaye ulawulo lufikeleleka ngokulula.
Kwelinye icala, ubungakanani bokubamba i-DSLR esandleni sakho ayisiyo-ergonomic. Nokuba iqhosha leRekhodi, elahlukileyo kwikhamera nganye. Ngasemva kweekhamera ezininzi, ngokuchasene neqhosha lokuvala, elingaphezulu. Yinto engaqhelekanga leyo.
Ulawulo lwebhanyabhanya luhleli kwimenyu, ngokungathi yi-camcorder. Umahluko kukuba kwi-camcorder, imisebenzi ibhekisele kuphela ekubanjweni kwevidiyo. Kungenxa yokuba inkqubo yemenyu yeDSLR ijolise ngakumbi kufoto olusebenzayo, ayisiyiyo imisebenzi emininzi efanelekileyo yokwenza iimuviemaking.
Ezi zicwangciso zenza ingqiqo yokuhlala ulungile:
Faka kwi-HD: Qiniseka ukuba usete kwi-1920 × 1080. Kwaye ukuba ikhamera iyavuma, setha kwinqanaba elifanelekileyo lesakhelo.
Sebenzisa useto lwencwadi: Xa ukuvezwa kusetelwe kwiNcwadana, ungangena kwi-Live View kwiimfuno zakho ngqo.
Qinisekisa ukuba ukurekhodwa kwesandi kuvuliwe: Uninzi lwexesha lokuqala lenze okona kulungileyo D. W. Griffith ukuzenza ongeyonjongo, kunjalo.
Cwangcisa ibhalansi emhlophe ukuba izenzekele: Yenza oku kuphela njengokuthintela ukhuseleko. Akukho nto imbi njengokudubula indawo yangaphandle kunye nebhalansi emhlophe esetelwe eTungsten kunye nokwenza yonke into ibe luhlaza. Zigqume kuZenzekelayo de ube uthatha indawo yokufunda ngesandla.
I-DSLR ifuna ngokucacileyo i-finesse, kodwa xa yonke into imiselwe kakuhle, inokufumana iziphumo ezimangalisayo ezibandakanya
Umgangatho womfanekiso omhle: Ngenzwa amaxesha amaninzi amakhulu kunalawo afunyenwe kwi-camcorder ezinikezelweyo- kwaye idityaniswe ne-optics ebukhali-uya kuthatha umfanekiso ogqwesileyo.
Ukuguquguquka kweelensi: Nokuba uhamba nefisheye emnandi ukuyila ngobunono umxholo okanye uthathe isigqibo kwilensi ende yomnxeba ukusondeza isenzo, ngequbuliso, umbono wokuyeka ukusondeza amandla kuyo yonke indawo kwii-camcorder ayisiyonto inkulu kangako.
Ubunzulu obunomtsalane kulawulo lwentsimi: Iilensi zekhamera zinikezela ngoncedo olucacileyo kwinqanaba lokugxila kwindawo. Unokunikezela ngezinto ezibukhali kwindawo yesehlo usebenzisa ubunzulu bentsimi. Kwelinye icala, unokwenza indawo encinci yokujolisa kwisiphumo esibonwa rhoqo kwiifilimu.
Umsebenzi owandisiweyo: Izixhobo ezibangela ukude, iinkqubo zokubeka, izinto zokuhambisa ngaphandle kwamacingo, iadaptha zokujonga izinto, kunye nezinye iithoyi ezininzi zinceda ekufezekiseni amaphupha akho eemoviemaking.
Ukubanjwa kokukhanya okumangalisayo: Enye inzuzo yesayizi enkulu yesenzi kukuba iyasinciphisa kakhulu isandi esihlala sinxulunyaniswa nokubanjwa kokukhanya okungaphantsi. Iilensi ezikhawulezayo zikuvumela ukuba unike iinkcukacha ngakumbi kumfanekiso kune-camcorder ephakathi. Ke kukho amandla e-ISO ekuvumela ukuba ulawule uvakalelo lwenzwa.
Eminye imiba ye-DSLR yokunyusa i-moviemaking irhabaxa kwimiphetho, ngolu hlobo:
Umcimbi ekugxilwe kuwo: Ii-DSLR's zinzima ngakumbi ukugxila kune-camcorder. Kunzima ukufumana ugxininiso oluchanekileyo ngekhamera ye-LCD yekhamera. Iilensi ze-camcorder zikuvumela ukuba usondeze yonke indlela ekujolise kuyo, ke kugxilwe ngqo. Iilensi zekhamera zibonelela ngendlela encinci ngenxa yomyinge omfutshane phakathi kobude obugxile.
ungayifaka phi inaliti
Ukungabikho kolawulo olwaneleyo: Iikhamera ze-DSLR zinokubamba iifilimu ezikumgangatho ophezulu, kodwa ngenxa yokuba umsebenzi wokuqala wekhamera kukuthatha imifanekiso emileyo, inolawulo oluncinci lokwenza iimovi. Iimodeli ezininzi zeDSLR zibonelela ngolawulo oluncinci ekuvezeni ngelixa udubula.
Ixesha elilinganiselweyo lokurekhoda: Ezinye iikhamera zinciphisa ukubanjwa ukuya kwimizuzu eli-12 ngexesha kwimo epheleleyo ye-HD. Lo mda akufuneki ubonise ingxaki kuba kuya kufuneka kunqabile ukuba uthathe ixesha elide eliqhubekayo lokuthatha ifilimu oya kuyihlela.
Ayisiyo-ergonomic: Ngenxa yokuba yenzelwe ukudubula i-stills, i-DSLR ayinakulungeleka ukuyibamba ngokwenza iimuvi.
Awunabubele kwisandi: I-DSLR ayiboneleli ngokubanjwa okumnandi. Imakrofoni eyakhelwe-ngaphakathi eyayibekwe apho ukuze ibhalwe amanqaku ezwiifoto. Hlanganisa oko kunye nokungabikho kolawulo kumanqanaba omsindo kunye nokunxibelelana kwentambo ye-XLR kwaye imeko iba mbi. Nangona kunjalo, ikhamera ibonelela nge-mini-plug yokongeza imakrofoni yangaphandle kunye nokuxuba umgca kunye negalelo leXLR.
Isango elijikelezayo: Nangona kuvakala ngathi yinto yokurhoxisa efestileni yakho yokulala, isango eliqengqelekayo eneneni sisiphene esiqhelekileyo sokucinga esenzeka xa ikhamera ihamba ngokukhawuleza okukhulu.
Isivamvo eyodwa: Le ayisiyonto idibeneyo njenge-tradeoff. Inzwa enkulu ngokucacileyo iphakeme phantsi kweemeko zokukhanya okuphantsi. Nangona ukuhanjiswa kombala kulungile, ayilunganga njengaleyo yeekhamera ezinikezelweyo.
Ubushushu kubushushu: Iikhamera zeDSLR ziyaziwa ngokufudumeza kwaye zinokuyeka ukurekhoda ngaphandle kwesilumkiso.
iphepha elimhlophe elincamathele kwisikrini somthi
ingakanani robitussin dm yokufumana phezulu
testosterone cypionate dosage yokunciphisa umzimba
Ukusetyenziswa kwexesha elide kwe-gabapentin
san pedro cactus umthamo